Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 December, 2013, 19:07 GMT 22:07 SGA
Ciidanka Djibouti oo weerar qaadayMaqal05:38
Labadii maalmood ee u dambeeyay ciidamada Djibouti ee ka tirsan AMISOM iyo kuwa Dowladda federaalka ayaa waxa ay qabsadeen deegaanno ay horey uga talin jireen al-Shabaab.
28 Novermber 2013
Koronto la'aan ka jirta NigeriaMaqal03:08
Wadanka Nigeria,dad lagu qiyaasay 60 milyan ayaa guryahooda ama goobaha ganacsiga ku adeegsada matoorada korontada dhaliya.
23 Novermber 2013
Waxay ku saabsan tahay qaxootiga Soomaalida ee Kenya jooga ma la gaaray xiligii ay ku noqon lahaayeen Soomaaliya.
Muusigga iyo SalaamahaMaqal26:37
Barnaamijka Muusigga iyo Salaamaha ee laanta Af-Soomaaliga ee BBC. 21 Novermber 2013
Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa BBC uga warrantay mooshinka ka dhanka ah xukuumadda Raiisul Wasaare Saacid ee ay maanta u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka.
21 Novermber 2013
Xaaladda waddada isku xirto Muqdisho iyo BaydhaboMaqal04:19
Ciidammada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maammulo magaalooyinka u dhexeeya Muqdisho iyo Baydhabo, laakin sida uu ku warramayo weriyaheenna Mucallimu oo dhawaan safar ku maray dhulkaas, xaaladdu weli way adagtahay.
Boliiska Muqdisho oo bilaabay adeega deg degaMaqal04:41
Boliiska ayaa sheegay inay bilaabeen adeegii gurmadka deg dega ee teleefoonkiisa uu ahaa 888 markii ay jirtay dowladii Soomaaliya.
17 Novermber 2013
Wareysi al-Fanaan Cawaale AadanMaqal16:27
Heesaaga reer Jabuuti Cawaale Aadan, ayaa waxa uu BBC uga warramay sida uu fankiisa ugu saleeyay nolosha qurbaha kadib markii uu degay waddanka Canada.
9 Novermber 2013
Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aden, oo madax ka ah hay'adda Elman, xarunta nabada iyo xuquuqda aadanaha ee Elman, waxa ay ka shaqaysaa arimo dhawra oo ay kamid tahay u ololaynta ka hortaga kufsiga haweenka iyo ka shaqaynta nabadda. 3 Novermber 2013
Gargaarka gabdhaha GaarisaMaqal04:05
Sofia Cabdi Toori, waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya, balse waxay ku caanbaxday wax u qabashada dumarka magaalada Gaarisa.
3 Novermber 2013
Machar: Waan haysanaa badi dalka
Ra'iisalwasaaraha Soomaaliya oo la dhaariyay